Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 3:45 PM
“Sex (သို့) ဘုရားသခင့်လက်ဆောင်”တဲ့လား
လွန်ခဲ့သော မဟာသင်္ကြန်တော်အခါသမယဆီက သီတဂူဆရာတော်ကြီးကို ဖူးမျှော်ခွင့်ရရှိခဲ့သည် သြ၀ါဒစကား ကိုလည်း နာယူခွင့်ရခဲ့သည်။ ပညာသင်နေကြသော ရဟန်းတော်မျ...
မင်းနဲ့ ငါ ဆုံတွေ့လေဦးမလား
မင်းနဲ့ ငါ ဆုံတွေ့လေဦးမလား =============== ဂင်္ဂါ ကုမုဒိနီ သန္တာ၊ သင်္ခဝဏ္ဏာ စ ကောကိလာ။ ဇမ္ဗု တာလဖလံ ဒဇ္ဇာ၊ အထ နူန တဒါ သိယာ။ နှမရယ် ...
မောင်ပြောလိုက်လေ ------------------------ ဘကြီးဘုန်းကြီးခမျာ ခေတ် ခေတ် ဟုသာ ငြီးချင်းအမှု ပြုမိပေတော့သည်။ ရုပ်မြင်သံကြား၊ မ...
(၁၂) ဆရာဘုန်းတော်ကြီး၏ မျက်နှာသာပေးမှု မခံရသော ကိုရင်ငယ်တစ်ပါး၏ အနေကျုံ့မှုမျိုးကို အသင်းခွဲခံ လိုက်ရသော သိုးမဲတစ်ကောင်လို သူခါးသီးခဲ့ဖူးသည်။ ...
ငယ်ငယ်က အလင်္ကာကျမ်းကို သင်ရတဲ့အခါ ဒေါသက လွတ်မြောက်ပြီး ဂုဏ်မြောက်တဲ့ အဖွဲ့အနွဲ့မျိုးတွေကို ကျက်မှတ်ခဲ့ရတယ်။ အလင်္ကာကျမ်းကို ပို့ချတဲ့ ဆရာက မဃ...
Harus Di Catat, Ini Dia Kelebihan Dan Kekurangan Print Kain Katun ! - Katun adalah salah satu jenis kain yang paling populer kalangan masyarakat jika dibanding jenis-jenis kain lainnya. Katun ini adalah salah satu kain yang p...
About - VEN. KUSALASAMI GUTLEUTSTR 127, 60327, FRANKFURT AM MAIN Telephone: +4915214489565 Email: kusalasami@gmail.com Venerable Kusalasami was born in 1981 at Pya...